Lee Dixon: Haddii Aad Difaacyadan Arsenal Ku Darto Virgil Van Dijk, Waxba Kama Badali Karo, Waa Dhibaato Maskaxeed Oo U Baahan In La Badalo. - Gool24.Net
Lee Dixon: Haddii Aad Difaacyadan Arsenal Ku Darto Virgil Van Dijk, Waxba Kama Badali Karo, Waa Dhibaato Maskaxeed Oo U Baahan In La Badalo.
Xididigii hore ee kooxda Arsenal ee Lee Dixon ayaa aaminsan in xataa haddii difaaca Arsenal lagu xoojin lahaa Virgil Van Dijk in aanu wax xal ah u noqdeen isaga oo ku dooday in maskax ahaan ay u dhibtoonayaan difaaca Arsenal.
Lee Dixon oo la hadlayay BBC 5 Live Sport ayaa ku dooday in wixii ka dhacay finalkii Europa League ee ay Gunners guuldarada wayni ka soo gaadhay Chelsea uu ahaa dhibaato maskaxeed oo ay haysata difaaca kooxdiisii hore ee Gunners.
Arsenal ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee finalka Europa League afar gool looga dhaliyay tan iyo sanadkii 2006 kii markaas oo ay kooxda Sevilla guuldaro 4-0 ah finalkii tartankan ku baday kooxda Middesbrough.
Iyada oo la ogyahay qaabkii uu Van Dijk u xaliyay dhibaatadii difaaca Liverpool, ayuu haddana Lee Dixon aaminsan yahay in xataa hadii Van Dijk lagu dari lahaa difaacyada hadda ee Arsenal in aanu wax xal badan ah ka sameeyeen.
Xidigii hore ee Arsenal ee Lee Dixon oo ka hadlaya dhibaatada difaaca Arsenal ayaa yidhi: “Waxaan idiin sheegayaa in aad afartan difaac ee waqti xaadirkan aad ku dari karto Van Dijk, sida ay kooxdani u samaysan tahay ee kubbad la’aanta ah, isagu wax farqi badan ah kamuu sameeyeen”.
Intaas kadib Lee Dixon ayaa sheegay in waxa haysta difaaca Arsenal uu yahay dhibaato maskaxeed wuxuuna yidhi: “Waxay ku saabsan tahay badalida maskaxeed, hadda sanado ayayna ku soo fiicnayn la’aanta kubbada, taasi waxay ku qaadanaysaa wax ka badan hal ciyaartoy, waxay qaadanaysaa in ka badan shan daqiiqo”.
“Waxay qaadanaysaa shaqo iyo dadaal badan oo lagu sameeyo garoonka tababarka. Isaga (Emery) waxaa waajib ah in la siiyo waqti uu ku sameeyo, laakiin waxa uu u baahan yahay tayada ciyaartoydii uu taas ku samayn lahaa” ayuu Lee Dixon hadalkiisa sii raaciyay.
Lee Dixon oo 14 sanadood ku soo qaatay kooxda Arsenal ayaa aaminsan in badalka ciyaartoyda difaaca oo Arsenal samaysaa aanu xal kaliiya noqon doonin balse uu Emery u baahan doono in uu shaqo badan ku qabto xarunta tababarka.